एकै परिवारका ६ जनाले गरे आत्महत्या — Sanchar Kendra
१असेन्सियोको ह्याट्रिकमा रियलको शानदार जीत
२प्रतिनिधि सभा बैठक बस्दै, यस्ता छन् कार्यसूची
३मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक बस्दै
४देशभरको मौसम बिहीबारदेखि शनिबारसम्मै बदली हुने
५रूपा सुनारको पक्षमा फैसला गर्दै अदालतले घरबेटीका नाममा बल्ल दियो यस्तो आदेश, अब के हुन्छ ?
६वायु प्रदूषणका कारण वार्षिक ७० लाख व्यक्तिको अल्पायुमै मृत्यु : डब्लुएचओ
७आईसीसीको एकदिवसीय वरियतामा सन्दिपको फड्को
८अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई यसरी पर्यो चिठ्ठा, भित्री खेलको रहस्य बल्ल बाहिरियो, ओलीलाई चक्मा दिदै गरिन बेग्लै तयारी
९अर्को ठुलो झट्का लागेपछि तनावमा माधव नेपाल, माओवादी प्रवक्ताले खोले यस्तो रहस्य
१०आज २०७८ असोज ७ गते बिहीबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल
११सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक सकियो, के जुट्यो सहमति ?
१२पालना नगरे सरकारसंग भएको तीनबुँदे सहमति तोडिने विप्लवको चेतावनी
भारत झारखण्डमा एक परिवारका सबै ६ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । झारखण्डको हजारीबाग शहरका एक व्यवसायीको सबै परिवारका सदस्यको शव घरभित्रै फेला परेको हो । घरबाट प्रहरीले ६ वटा सुसाइड नोट पनि फेला पारेको जनाएको छ ।
रातो रंगको कागजमा रहेको सबै सुसाइड नोटमा आफूहरुले स्वेच्छाले आत्महत्या गरेको उल्लेख गरिएको जनाइएको छ । यद्यपि, बच्चाको भने घाँटी रेटेर हत्या गरिएको उल्लेख छ । सबै शव घरको विभिन्न स्थानमा फेला परेका थिए ।
सुसाइड नोट कस्ले लेखेको हो भन्नेमा प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ । प्रारम्भिक छानबीनमा ती व्यापारीको ठूलो रकम फसेको खुलेको प्रहरीले जनाएको छ । ७० वर्षीय महावीर माहेश्वरी शहरको ड्राइृ फ्रुट्सका ठूला व्यापारी रहेको उल्लेख गरिएको छ ।(एजेन्सी)